http लागि गोपनीयता नीति://19216811login.online
अनुसार युरोपेली संघ र संयुक्त राज्य अमेरिका को व्यवस्था संग मा, हामी एउटा सानो फाइल भित्र आफ्नो आफ्नै कम्प्युटरमा आफ्नो प्राथमिकता बारे केही जानकारी भण्डारण हाम्रो वेबसाइट कुकी भनिन्छ भनेर सूचित.
एक कुकी तपाईँको कम्प्युटर वा मोबाइल उपकरणमा डाटा को सानो टुक्रा छ कि एक वेबसाइट भण्डारण गर्न आफ्नो ब्राउजर सोध्छन्. यो कुकी तपाईँको कार्यहरू वा प्राथमिकता दिन्छ “सम्झनु” समय वेबसाइट.
तपाईं आफ्नो कम्प्युटरमा पहिले नै सबै कुकीहरू मेटाउन सक्नुहुन्छ र तपाईं तिनीहरूलाई राख्दै बच्न सबैभन्दा ब्राउजर सेट गर्न सक्नुहुन्छ. तथापि, यदि तपाईं यो, तपाईंले केही प्राथमिकताहरू स्वयं तपाईं एक वेबसाइट भ्रमण हरेक समय समायोजन गर्न आवश्यक पर्दछ, र केही सेवा र सुविधाहरू काम नगर्न सक्छ.
सबैभन्दा ब्राउजर कुकीहरू समर्थन, तर प्रयोगकर्ता आफ्नो ब्राउजर अस्वीकार र जहाँ पनि रुचि तिनीहरूलाई मेट्न सक्नुहुन्छ. विभिन्न ब्राउजरहरूमा कसरी त्यसो गर्न निर्देशनहरू तपाईंलाई मदत गर्न, aboutcookies.org भनिन्छ तेस्रो-पक्ष वेबसाइटमा स्थापित गरिएको छ.
तेस्रो पक्ष कुकीहरू
केही तेस्रो-पक्ष कुकीहरू हाम्रो वेबसाइट द्वारा सेट गरिने छ र हामी तिनीहरूलाई कुनै पनि नियन्त्रण छैन. तेस्रो पक्षहरूबाट सेट हुन सक्छ कि कुकीहरू समावेश: Google विश्लेषण-हामी Google विश्लेषक वेबसाइट प्रयोग डेटा सङ्कलन गर्न प्रयोग. यो डाटा व्यक्तिगत पहिचान गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी समावेश गर्दैन. Google गोपनीयता नीति यहाँ अवलोकन गर्न सकिन्छ: www.google.com/policies/privacy/.
Portforward.com जब तपाईं जानुहोस्, हामी विज्ञापन सेवा तेस्रो-पक्ष कम्पनीहरु प्रयोग. यी कम्पनीहरु यो वा अन्य वेबसाइट र मिडिया को अन्य प्रकारका मा तपाईंको चासो को हुन सक्छ भनेर सामान र सेवाहरू बारे विज्ञापन प्रदान गर्न तपाईंको यात्रा जानकारी प्रयोग गर्न सक्छ. केही पृष्ठहरूमा, हामी विज्ञापन देखाउन Google एड्सेन्स प्रयोग. यी विज्ञापन लक्षित वा गर्न सकिन्छ आफ्नो प्राथमिकता आधारित Google र हामीलाई दुवै साथ लक्षित.
GDPR र डाटा सुरक्षा अधिकारी
हामी हाम्रो वेबसाइट पूर्णतया GDPR अनुरूप छ विश्वास. हामी व्यक्तिगत डाटा को प्रक्रिया संलग्न छैन र त्यसैले हामी एक डाटा सुरक्षा अधिकारी चाहिन्छ भनेर विश्वास छैन. हामी हाम्रो साइट अपडेट र यसलाई पूर्ण GDPR अनुरूप बनाउन विश्वासको एउटा राम्रो प्रयास गरे. हाम्रो वेबसाइट अनुरूप छैन यदि तपाईंलाई लाग्छ कि, कृपया हाम्रो समर्थन प्रणाली हामीलाई सम्पर्क गर्न स्वतन्त्र महसुस र हामीलाई थाहा दिनुहोस्